Xildhibaanada Baarlamaanka oo su’aal ka keenay halkii ay ku dambeysay lacag dhan $440,000 | allsaaxo online
Xildhibaanada Baarlamaanka oo su’aal ka keenay halkii ay ku dambeysay lacag dhan $440,000
Published on May 9, 2018 by mahad hassan · No Comments
Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa su’aal ka keenay halkii ay ku dambeysay lacag gaareysa $440,000 oo doollar, kaasoo 16 bilood ee la soo dhaafay laga jarayay Xildhibaanada mushaarkooda min boqol doolar bil kasta.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ogaado halka ay lacagahaas ku baxday.
Xildhibaan Cali Ganey ayaa sheegay in lacagta $440,000 oo doollar ay uga fadhiyaan Guddoonka inuu caddeeyo halkii ay ku baxday, isla markaana lacagtaas aheyd keyd loogu tala galay in loo adeegsado xaaladaha degdeg ah, sida Xildhibaanka xanuunsada oo kale.
Arrintan ayaa ka dambeysay markii Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka C/weli Ibraahim Sheekh Muudey uu sheegay in loo baahan yahay in lacag loo uruuriyo gurmadka fatahaadaha wabiga Shabeelle, iyadoo Xildhibaanada dood ka keeneen halka ay ku baxday lacagihii horay loo uruuriyay.
Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa sheegay inuu lacagtaas dabagal ku sameyn doono, isla markaana la soo ogaanayo halka ay ku baxday, dibna Baarlamaanka loogu soo bandhigi doono.
Waxaa uu sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2017-dii bil walba Xildhibaanada mushaarkoodalaga jarayay lacag dhan boqol dollar, isla markaana ay soo socotay muddo 16 bilood ah, isla markaana lacagtaas ay baaritaan ku sameyn doonaan.